Qabsoo Oromoo Galmaan Gahuuf Oromoon Maal Gochuu Qabaa? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooQabsoo Oromoo Galmaan Gahuuf Oromoon Maal Gochuu Qabaa?
Abbaa Ormaatiin, Adoolessa 23, 2020
Dr. Abiy nafxanyaan qabatee maqaa Bilxiginaan (PPn) duula bal’aa Oromoo fi Oromummaa irratti ifaan labsee tarkaanfii fudhachuu ergaa jalqabee bubuleera. Karoorri Abiy Oromoof qabuu waan dhokataa mitti. Sirna nafxanyaa deebisee Oromoo irratti ijaaree Itophiyaa Minilik jaraa tokkoon dura jalqabee galmaan gahudha. Abiy ergaa gafa masaraa Minelikitii galee jalqabee dulaa Oromoo fi Oromummaa ratii dulaa jira. Kun immoo wan ragaan qabatemeedha. Gababadhumati kayyon Abiy Oromoo fi Oromummaan cabsuun maqaa Itoophiyaatin sirnaa nafxanya debisaani gadi dhabuudhaa. Fakeenya malatoo kana:
Qabsoo bilisummaa Oromoo hoggana dhabsiisuu;
Oromoo qaraa ta’an ajesuu, hidhuu, biyaa aryachuu, mana barumsaatii ariyachuun, kaan ajjeesuun;
Hoggannoota fi miseensota dhaabota Oromoo Dhaabota Oromoo siyaasaa jalaa hidhu, ajjeesu fi biyyaa baasun dhaabota laamisheessuun, hojii ala taasiisuun akka hin sochoone godhuu;
Oromoo afaaniin, amantiin fi gandaan qoqodu. Wallaggaa fi Jimmaan, Arsii fi Wallaggaan, Harargee fi Wallaggaan, Shawaa fi Wallaggaan, akka tokkummaan isaa laffuu shira adda addaa xaxuu;
Embassiti fayaadamuun activistota Oromoo, gazexesotaa Oromoo, hayyotaa fi media Oromoratii nafxanyaa bobasuun maqaa xurasutii jiraa.
Mootummaa federaalaa gaaraa hamma godaatti nafxanyootaan dhunfachisuu;
Ilmaan Oromoo sabbonummaatti shakkaman hunda aangoorraa ariyachuun, kaan mana hidhaatti guuruu;
Harka tokkoon Oromoo diigaa harka biraatiin nafxanyaa Oromoo irratti ijaaru; Oromoo hidhannoo hikkachiisaa nafxanyaammoo hidhachiisuu.
Oromummaa fi subbonummaa gadi qabu. Itoophiyummaa isa ol’antummaa nafxanyaa irratti ijaaramee ol qabu. Minilikiin isa ilmaan Oromoo miliyoona 6 ol fixeef lellisu. H/Sillaasee isa ilmaan Oromoo buqqisaa sirna nafxanyaa babal’ise faarsu.
Afaan Oromoo gadi qabuun akka ilmaan Oromoo afaan Oromootin hin baranne shiraa xaxu. Nafxanyota walitti qabuun seera barumsaa jijjiiranii ilmaan Oromoo akka afaan alagaatiin baratanu dirqisisu.
Mallattoo nafxanyaa kan ta’an Minilik fi H/Sillaassee sidaa dhaabuun hamilee Oromoo caabsuuf yaaluu;
Warra Oromoo gananii diina waliin Oromoo cabsan akka gotaatti faarsu (fakkeenyaaf Gobanaa Daaccee). Seenaa Oromoo haquf tattaaffii gochuu;
Diinaan waliin ta’uun daangaa Oromiyaa cabsisuun ummata Oromoo buqqisanii gamojjiitti naqu;
Oromiyaa mootummaa malee hanbisuuf hoggana motummaa Oromiyaa laaffisuun diinaaf Oromoo saaxilu;
Abbaa qabeenyaa Oromoo irratti olola hamaa gaggessu, qabeenyaa isaanii saamu akkasumas saamsisu;
Lafa Oromoo maqaa misoomaatiin diinaaf hiru, maqaa industrial zooniitiin Oromiyaa bakka addaddaatti ciru;
Finfinnee Amaaraa dabarsanii laachuu;
Qotee bulaan Oromoo akka hin qotanne, hin horsiifanne danquun minaan jalaa gubu, qotiyoo isaa jalaa fixu, baddaa Oromiyaa gubu. Walumaa galatti qabeenyaa Oromoo alagaaf dabarsanii kennu. Kan hafe immoo akka Oromoon ittiin hin fayyadamne jalaa barbadeessu;
Artistoota Oromoo dorsisuuf fi adamsanii ajeesuun aadaan, afaaniin, fi barruun Oromoo hin guddanne godhu. fi kan kana fakatnudhaa.
Amara party PPti galchufii wadaan Abiy galeef sobonotaa Oromoo belesuu, ABO belesuu, sagalee Oromoo kan akka OMN, ONN qileensadhaa ukamsuu, abbaa qabeenyaa Oromoo ta’an hojii ala tasisuu, Qeerroo fi Qarree Oromoo adamsuu fi belesuu, sirnaa federala diguu, Afaan Oromoo gad qabuu, fi Finfinee kan Amaraa gochuu dha. Akumaa wadaa galefii akka kana olitii tutuqamee gutafii jira.
Oromoon Maal Gochuu Qaba?
Seenaa Oromoo keessatti Oromoon diinaa fi rakkoo kana fakkaatanu keessa darbee as gehe. Fakkeenyaaf jaarraa kudha jahaffaa keessa diinni Oromoo marsaa hundaan itti bobbayee Oromoo balleessuuf gaafa sossocho’uu Oromoon bakka jiru hundaa Madda Walaabuutti walitti dhufuun marii yeroo mataduree “Maal tanaa?” jalaatii gochuun murtii gurguddoo dabarfatee hojiitti bobba’uun diinasaa ofirraa tiksuu qofa miti diina cabsee biyyasaa dhunfate as gahee.
Hardha Oromoon yeero akkasii keessa jira. Kanaafu akkuma bara sanaa hardhas Oromoon amantiin, gandaan, naannoon, umriin, saalaan utuu wal hinqoodiin tokko ta’ee diina kana ofirraa faccisee biyyasaa dhuunfachuun seenaa galmeessuu qofa utuu hin ta’in rakkoo fi dhibee sabaasaa jaarraa tokkoo olii injifannoon xumuruun dirqama dhala keenyaa ti.
Kanaaf Oromoon filannoo lamatuu fuldurasaa jira. garbummaa ykn walabumaa. Kanneen lameen keessaa tokko filachuu qaba.
Oromoon garbummaa Abiy dhiheesseef didee bilisummaa fi walabummaa filachuu isaa rukuni hundaan mul’isaa jira. Garuu walabumman tolaan hin argamu. Walabummaan gatii qaalii nama kafalchiisa. Seenaa adunyaa keessatti biya sirna gabroomfataa fi nama nyaataa tola ofirraa kan buqqise hin jiru. Kanaafuu kan Oromoos addaa hin ta’u. Keessattuu kan Oromoo qaalii guddaa, wareegama guddaa gaafata. Kunis filannoo Oromoo uutu hin ta’iin haala naanniichaa tiif qabeenyaa Oromiyaaraa kan ka’e.
Kanaafuu Oromoon jabaatee harka wal qabatee qabsoo jabeessuun bilisummaa fi abbaa biyummaa isaa mirkaneeffachuu qaba, dandeettiis ni qaba.
Qabsoo tokko mo’achuuf dursanii dina ofii siriitti hubachuun murteessaadha. Kanaafuu diinni Oromoo eenyuu? Dinni Oromoo bakka afuritti qaodamu.
Sirna nafxanyaa: Warra sirna nafxanyaa Minilik Oromoorratti deebisanii gad ijaaruuf tattaafatanu. Warri kun Dr. Abiyiin hoganamuu.
Gantuu fi Galtuu: Oromoota sirna nafxanyaa jalatti hiriiranii qabsoo Oromoo dura dhaabbatan. Warri kun warra sirna EPRDF keessatti Oromoorratti badii daangaa hin qabne dalagee itti gaafatamuurraa of hanbisuuf qabsoo Oromoo dura dhaabbatanu. Warra biyya ambaa keessatti bara dheeraaf jiruun itti jabaatee carraa hardha argameen maqaa fi qabeenyaa horachuu Abiy jala hiriiran.
Mootummota biyyoota naannoo sana jiranu kan akka mootummaa Eritraa Isaayaasiin gageeffamu. Ammatti gad bahee mul’achuu dhiisus warri kaanis Oromoof firaa miti.
Ijanoo isaanii cimina qabsoo Oromootu murteessa. Yoo qabsoon Oromoo cime hin firoomu yoo nuti laaffanne hin diinomu. Mootummaan Eritraa ijannoo “diinni diina kootii fira kooti” jechuun dhaabootii mootummaa TPLF morman danuu ofitti qabee gargaaraa turuunsaa ifaadha. Dhaabotii kana keessaa ABO fi Arbanyooch ginbaar argamu. Addi Bilisummaa Oromoo gargaarsi mootummaa Eritraa irraa argatu duuba dhiibbaa hamaatuu irratti gaggeeffamaa ture. Fakeenyaaf akka ABOn maqaa Oromoo jedhu dhiisee Itoophiyaa fudhatu, waraana ABO basaasuu, Arbenyooch ginbaar ofitti qabuun ABO alatti dhiibuu, midiyaa EthSAT jedhamu maallqa guddaa kennuu bira darbanii mootummaa Egypt akka dolaara $500,000 gargaaru gochuu, erga Abiy mootummaatti dhufee asittis ABOn akka biyyatti galu dirqisiisuu, erga biyyatti galeemmoo Abiy woliin ta’uun ABO irratti shira shiruu, kana bira darbee hardha mootummaan Esaayaas waraana ofii Oromiyaatti bobbaasuun Abiy-iif deeggarsa loltuu gochuun yoo bicate mooraa sadii keessatti waraana qubachiisee jira. Akkuma seenaan yaadatu bara Chaartaraa ABO dhiibanii biyaa baasuu keessati qooda guddaa qabu. WBO mooraatti naquun gaaga’ama hamaa kan irraan gahee waraana Eritraatti. Esaayaas kan kana godhuuf akkuma nafxanyaa qabeenyaa Oromootin biya isaa ijaarachuu dha.
Mootummoota biyya fagoo jiran kan durummaa qabanii sirna nafxanyaa Oromoo irratti dagaagsanii dha. Jarii kuns gafaa Oromoon hugnaa murtessaa ta’ee Oromoo firomfachuunsanii ifaadhaa.
Oromoon akkamitti jara kana dura dhaabbatee qabsoo isaa galmaan gahachuu danda’aa?
Duraan dursee Oromoon waa tokko hubachuu qaba. Sirni nafxanyaa jaarraa lamaaf adeemu kun dantaa Oromoo tiif kan dhaabbate utuu hin ta’iin Oromoo garboomfachuuf gadii dhaabbateedha. Oromoon akka ofii filateetti jiraachuuf dura sirna nafxanyaa kana hundeen Oromiyaa keessa buqqisuu qaba. Kanaafuu qabsoon amma adeemaaru qabsoo sirna nafxanyaa hundeen Oromiyaa keessa buqisu ta’uu qaba. Sirna nafxanyaan dimookrateseen waliin jiraadha jechuun waan nurran gahe waggotaa lamaan darban keessatti hubanneerra. Warri yaada sana qabatanii qabsootti galan haala nama gaddisiisuun mana hidhaatti dararamaa jiru. Sirni nafxanyaa fi Oromummaan akka waliin hin jiraanne ragaa waggoota lamaan darban calaa hin feesisu. Dinni Oromoo sirna nafxanyaa fi warra sirna nafxanyaa Oromoo irratti deebisuuf tattaafatuudha.
Yeeroo ammaa kana keessatti dhaabiileen siyaasaa haqa Oromoo tiif falmuutti jiranu ABO fi KFO qofa. Abiy fi nafxanyaanis kan itti duulaa jiranis jaruma kana lamaanitti. ABO fi KFOn waggoota dheeraaf waliin hojjataa turan. Ammas hariiroon jaraa itti fufee akka dhaaba tokkootti waliin hojjataa jiru. Utuu mootummaan Abiy danqaa hin taane silaa walitti baqanii qabsoo qindomina qabu gaggeesu turan. Hata’u malee hardhas walumaan jiru. Hogganni ABOs hogganni KFOs lachuu hoggana Oromooti waliin du’aa jiru, waliin waajiraaleen irratti cufamaa jira, waliin hidhamaa jiru, waliin du’aa jiru. Kana jechuun kessa jara wari dentaan bitaamanii dhaboti kanaa dudubatii debisuu tatafatanuu hin jiranuu jechuu mitti!
Oromoon akka Oromooti of ijaree dentaa sabaati yadaa bilchataa fi ijaramaa jalatii qabsahuu qaba.
Oromoon Oromiyaa keessa jiru qabsoo isaa walitti qindeessee kaabaa hamma kibbaatti bahaa hamma lixaatti wal duukaa ka’uun diina ofirraa qolachuu qaba. Kana jechuun
Namaa dhunfaa jalaa ka’uu dhisuun yadaa bilchataa fi ijaremee jalaati ijaramuu.
Mootummaan Abiy Oromiyaa keessatti akka hin sochoone gochu, waajjira mootummaa garboomfataa ummata Oromoo irratti fedhuuf tattaafatan barbadeessu.
Oromoota mootummaa keessa jiran, waraana mootummaa keessa jiran, poolisii Oromiyaa keessa jiran fi miliishaa Oromiyaa keessa jiran akka jarri qabsoo ummataatti dabalaman dhiibbaa gochu.
Gabaa lagannaa, karaa cufuu, waan kana fakkaatan walfaana tarkaanfii fudhachu.
Waraana Bilisummaa Oromoo cina hiriiruun deeggarsa barbaachisu hunda gochu.
Diina ofii xiqqaatees guddatees sirriitti hubachuun tarkaanfii barbaachisu fudhachu.
Lafa bilisaa ta’etii bulchaa filachuun of bulchuu jalqabuu.
Oromoon biyya ambaa jiru gargaaraa qabsoo Oromoo ti malee hogganaa qabsoo Oromoo akka ta’uu hin dandeenye hubatee bakka tokkotti walitti dhufee:-
Qabsoon Oromoo qabsoo haqaa ta’uusaa adduunyaa beeksisu. Sagalee sabaa ofii ta’uun maqaa xuresaa nafxanyaa duraa dhabachuu;
Oromoo firaa dhihofii fagoo horuu;
Qabsoo biyya keessatti ta’uun waliin qindeessuun akka Oromoon kallacha hundaan jiru oduu walii dabarsuu gargaaru;
Maallaqaa fi yaadaan qabsoo Oromoo gabbisu;
Waraana Bilisummaa Oromoo hidhachiisu. Qbasoon sa qabsoo haqaa ta’uu adunyaatto himuu;
Qeerroo fi Qarree Oromoo yaadaa fi tooftaa haaraa haala biyyattin walsimatu burqisisuun gargaaru;
ABO fi KFO yaadaan gabisuu. Wan hanqatee gorsuu.
Dhumarrattis Oromoon kan hubachuu qabu ajeechaan goota Oromoo Hacaaluu Hundeessaa senaa Oromoo keessatti isa jalqabaa miti. Iss dhumaatiis hin ta’u. Seenaa Maccaa fi Tuulamaa (MTA) hubachuun barumsaa fi ragaa gaarii ta’uun ni mala. Sirni nafxanyaa shira walfakkaataa xaxee hogganoota Oromoo galaafachuun waan ifatti beekamu. Mana seexaanaa (cinema) gubanii hogganoota MTA-tu gubee jechuun kan akka Maammoo Mazamir dabalatee hogganoota isaa galaafachuun seenaa dhihooti. Kanaafuu Oromoon utuu hin raafamiin tokkummaa isaa cimsee sirna nafxanyaa fi gaggeesitoota isaa of irraa hundeen buqqisee sirna isaaf ta’u gadi dhabbachuu malee filannoo birra hinqabu. Oromoon hamma yoomitti gowwoomfamaa, ajjeefamaa, buqqifamaa, arrabsamaa taa’aa?
Dhiibbaan ABO fi KFO irratti godhamaa jirus waanuma MTA bara 1966 qunnameen gosa tokko. Mootummaan Hacaaluu ajjeesisee isaan walqabsiisuun hogganoota ABO fi KFO mana hidhaatti naqee jira. Oromoon qabsoo bilisummaa jabessee itti fufuun hogganoota isaa mana hidhaa baasuu qofa uttu hin ta’iin of bilisoomsuun dirqama!